उपत्यकामा निषेधाज्ञा फेरि थपिने तयारी, कति दिन थपिने ? | Khabar Sadan खबर सदन
Home समाचार उपत्यकामा निषेधाज्ञा फेरि थपिने तयारी, कति दिन थपिने ?
काठमाडौं उपत्यकामा खुकुलो बनाइएको निषेधाज्ञा ‘लुजडाउन’ फेरि ७ दिन थपिने तयारी गरिएको छ । लुजडाउन अवधि थप्नेबारे छलफल गर्न उपत्यकाका ३ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठक आज बस्दैछ ।
संक्रमण नघटेकाले अझै एक हप्ता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी भएको छ । अब फास्टफुड खोल्ने तयारी भएको छ तर होटल तथा रेस्टुरेन्टमा बसेर खान भने पाइने छैन । सार्वजनिक यातायात यो हप्ता खोल्ने तयारी भएको थियो संक्रमण नघटेकाले तत्काल खुलाउने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरुले स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर सार्वजनिक यातायात पनि खोल्न दिनपर्ने माग गरिरहेका छन् । यद्यपी थपिन लागेको निषेधाज्ञामा के खुल्ने के नखुल्ने भन्ने विषयमा बैठकबाटै निर्णय गरिने छ ।
यसअघि थपिएको निषेधाज्ञा भोली सकिदैंछ । अहिले निजी सवारीसाधन जोर विजोर प्रणालीअनुसार सञ्चालनमा आएको छ भने कपडा पसल, सपिङ मल, एलोक्ट्रानिक पसल लगायतका व्यवसाय बारअनुसार स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाइ खुला गरिएको छ ।
Previous articleआज हेर्नुहोस कस्तो छ तपाईंको भाग्य र पाथिभरा माताको दर्शन गरौ, आज – १३ आषाढ २०७८ आइवारको राशिफल हेर्नुहोस
Next articleहजारौँको सम्पर्क टुट्यो कर्णाली सत्ती पुल कटान हुदा